Wax ka Ogaaw Taariikh Kooban oo Ku saabsan Xirfada Cayaareed ee Goolhaye Petr Cech kaddib markii uu Shalay ka dhawaajiyay inuu ka fariisanayo Kubbada Cagta – Gool FM
( London ) 16 Jan 2019. Goolhayaha kooxda Arsenal Petr Cech ayaa ku dhaqaaqay inuu ka fariisanayo kubbada cagta marka uu dhammaado kal cayaareedkan kaddid mudda 20-sanaa uu ahaa xirfadle dhanka goolka ah.
Hadaba wax kabaro taariikh kooban oo ku saaban nolasha cayaareed ee Cech iyo guulaha uu la gaaray kooxaha uu saamaray iyo xulkiisa qaranka Czech Republic
Petr Čech ayaa dhashay 20-kii May 1982-dii waa xirfadle kubbada cagta u dhashay Czech kasoo goolka uga cayaara kooxda Premier League ee Arsenal.
Wuxuu ku u dhashay Plzeň, Čech ayaana xirfadiisa kubbada cagta kasoo bilaabay Chmel Blšany 1999-kii, halkaa uu si aan caadi aheyn ugu cayaaray laba sano ka hor inta uusan u guurin kooxda ugu awooda badan horyaalkaa ee Sparta Prague 2001.
Markii da’diisu aheyd 19-sano, Čech ayaa helay booska joogtada, isagoo hal xagaa sameeyay waxqabad aad u wanaagsan, wuxuu diiwaan galiyay rikoodhka aan gool laga dhalin horyaalka 903-daqiiqo. Taasna waxay ka dhigay inuu u cayaaro kooxaha dibbada, markaa oo uu u dhaqaaqay kooxda horyaalka France Rennes qiimo dhan €5.5 million euro oo u dhiganta (£3.9 million oo gini ) sanadkii 2002.
Waqtigisii France, Čech ayaa ku bilaawday hanaan cayaareed fiican taasoo si dhaqso ah kaga dhigtay inuu ku biiro naadiga horyaalka Premier League ee Chelsea qiimo gaaraya £7 million gini oo u dhiganta (€9.8 million euro) 2004-tii, kasoo noqday heshiiskii ugu qaalisanaa oo ay kula soo saxiixdaan goolhaye.
Inta lagu guda jiray 11-sano uu kooxda galbeedka London kamid ahaa, Čech ayaa u saftay 486 kulan, wuxuuna kamida noqday xiddiga kooxda ugu safashada badan isagoo kaalinta lixaad kasoo galay. Sido kale wuxuu kooxda ka caawiyay ku guuleysiga horyaalka Premier League afar jeer, afar mar FA Cup, seddax mar League Cup, mar koobka UEFA Europa League, iyo hal mar oo koobka UEFA Champions League.
Sido kale wuxuu heystaa rikoodha ugu badan ee shabaq ilaalinta wuxuuna gool ka ilaaliyay shabaqiisa 220-kulan.
Čech ayaa 2015-kii ka tagay Chelsea wuxuuna ku biiray kooxda ay coltamaan ee Arsenal qiimo gaaraya £10 million gini, wuxuu halkaa ku qaaday FA Cup iyo laba mar oo koobka FA Community Shields.
Xirfadiisa heerka caalami, Čech ayaa markii u horreysay u saftay qaranka Czech Republic sanadkii 2002, waana ninka ugu safashada badan taariikhda xulka qaranka Czech uu u cayaaray 124-dheel. Sido kale wuxuu xulkiisa matalay 2006 koobkii adduunka, si lamida 2004, 2008, 2012, iyo 2016 uu xulka u matalay kooxda qaramada qaarada yurub.
Wuxuu kamid noqday kooxdii ugu fiicneed ee koobka qaramada yurub Euro 2004-tii ee All-Star team kaddib markii uu qarankiisa ka caawiyay iney tartanka ka garaan wareega afar dhammaadka, isagoo sido kale noqday kabtan xulka, wuxuuna cayaaraha heerka caalami ka fariistay 2016-kii. Čech ayaa sido kale heysta rikoodhka ugu badan ee abaalmarinta laacibka sanadka Czech Footballer iyo Czech Golden Ball wins.
Waa mid kamida goolhayahaashii ugu wanaagsanaa kubbada cagta, Čech ayaa heysta rikoodha dhanka gool ilaalinta ah, waxaana kamida safashada ugu yar ee Premier League uu ku sameeyay 100-kulan oo shabaqa aan laga taaban ama aan gool laga dhalin, wuxuuna rikoohkaa ku sameeyay 180-kulan, wuxuu sido kale heysaa tirade ugu badan ee shabaqa uu ilaashaday hal xagaa horyaalka waana (24-jeer), si lamida waa goolhaya taariikhda Premier League gool ilaashaday (202-kullan).
Čech waa goolwalaha qura ee horyaalka Premier League ku guuleystay abaalmarinta Gacmaha goolhayaha laba koox oo kala duwan, wuxuuna ku guuleystay afar jeer oo kala ah 2004–05, 2009–10, 2013–14 iyo 2015–16.
Sido kale wuxuu noqday IFFHS World’s Best Goalkeeper in 2005, isagoo helay abaalmarinta goolhayaha ugu wanaagsan horyaalka 2004–05, 2006–07 iyo 2007–08 oo ay usii dheer tahay goolhayaha ugu wanaagsan UEFA Champions League, isagoo aan gool laga dhalin 1,025-daqiiqo 2004–05, rikoodhkaa oo sido kale uu ka dhigay Premier League.